Date: December 18, 2015Author: Oromedia 0 Comments
Dinqeessaan Jaalala fi guddina afaan Oromoof illee gumaachuuf kaayyoo guddaa waan qabuuf unversity Ambooti Digrii jalqaba Afaan Oromoon barataa kan ture fi qabxii 4:00 galmeessisee rakkoo jireenyaf kan addaan kutee fi itti fufuuf kaayyoo guddaa qaba ture. Dinqeessaan ilmaa sabaaf uumame qaroo qeerroo oromoo addaa dureen dirqama oromummaa isaa raawwata tureedha.
Dinqeessaan sochii diddaa barattoota Oromoo kan 2001,2004 fi 2005 shawaa lixaa keessatti ta’aa turee addaa dureen hirmaataa akka ture seenaan ragaa baha. Jimmatti illee miseensa koree Tokkummaa barattoota Oromoo unversity fi kolleejjii Jimma keessatti shooraa ijaarsaa fi sabboonummaa oromoo irratti gahee guddaa taphataa ture. Akkasuma Koree Aadaa fi aartii Oromoo kolleejjii barsiisota oromoo hanga cufamutti miseensa irraa ka’ee dirqama ooganummaa garaagaraa ti dirqama isaa bahaa ture.
Dinqeessaan nama barnoota isaan jabaa fi amala qabeessa fakkeenyaa dargaggoo oromoo ta’eedha. Goota miseensa qeerroo Dinqeessan osoo guyyaa tokko duubatti hin deebi’iin Osoo falmuu gaafa guyyaa 16/12/2015 waraana agaazii wayyaaneen #Ginci ti wareegame. Gumaan goota kana ni baati.
Goonnii kun hiriyaa isaa Jaagamaa Badhaanee ti makamee gumaa koo baasaa jedhe.
Funerals have taken place across Ethiopia’s Oromia region after weeks of clashes between security forces and protesters.
Members of Ethiopia’s largest ethnic group, the Oromo, have been demonstrating against plans to build on their lands.
Previous Previous post: MISEENSOTNI OPDO MAGAALAA FINFINNEE MORMII KAASAN
Next Next post: የኦሮሚያ ተቃውሞ የሽብር አድራጎት ሳይሆን በሕግ አግባብ ሊታዩ የሚችል የተቃውሞ አቀራረብና መብትም ነው